Heathrow wuxuu si guul leh ugu daray shidaal duulimaad waara hawlgalkiisa
Bogga ugu weyn » Wararka garoonka » Heathrow wuxuu si guul leh ugu daray shidaal duulimaad waara hawlgalkiisa
Shidaalka duulimaad ee waara ee qayb ahaan awooda diyaaradaha Heathrow madaama madaarku socdo si loo yareeyo qiiqa.
Iyadoo la shaqeyneysa Vitol Aviation iyo Neste, Heathrow wuxuu noqday garoonkii ugu horreeyay ee weyn ee Boqortooyada Ingiriiska si loogu guuleysto isku-darka shidaalka duulimaadka (SAF) ee shidaalka loo qaybinayo.
Kahor Shirka G7, shidaalka waxaa lagu dhex qasi doonaa garoonka diyaaradaha ee magaalada UK shidaalka ugu badan laga soo bilaabo 3-da Juun
Sahayda, oo u dhiganta shidaalka loo baahan yahay si loo isticmaalo inta u dhaxeysa 5-10 duulimaadyada gaagaaban, ayaa ujeedadeedu tahay inay u adeegto caddayn fikradda si ay awood ugu siiso isticmaalka ballaaran ee SAF ee horay u socda
Heathrow waxay si guul leh ugu dartay shidaal duulimaad waara (SAF) howl galkeeda, kahor Shirka G7. Iyaga oo ka wada shaqeynaya Vitol Aviation iyo Neste MY Sustainable Aviation Fuel ™, shidaalka waxaa lagu dari doonaa shidaalka ugu badan ee garoonka maanta, waxaana lagu dhex dari doonaa isticmaalka duulimaadyada Heathrow maalmaha soo socda. In kasta oo shidaalka la siinayo uu isbarbar dhigayo una dhigma shidaal siinta 5-10 duulimaadyada gaagaaban - keenista ganacsigan ayaa cadeyneysa cadeynta fikirka garoonka ugu weyn UK. Ku guuleysiga marxaladdan waa tallaabada ugu horreysa ee muhiimka ah ee lagu muujinayo Dowladda in tiknoolajiyadda ay ka shaqeyn doonto yareynta kaarboonka duulimaadka illaa iyo inta qaab-dhismeedka siyaasadeed ee saxda ah ee dhiirrigelinta qaadashada miisaan lagu gaarayo.
Khabiirka Vitol Aviation ee ku takhasusay maaraynta shidaalka diyaaradaha waxaa lagu dari doonaa awooda wax soo saarka SAF ee suuqa hogaamineysa Neste. Neste MY SAF waxaa laga soo saaray 100% qashinka la cusboonaysiin karo iyo kuwa waara iyo hadhaaga alaabta ceyriinka ah, sida saliida wax lagu karsado ee la isticmaalay iyo qashinka dufanka xoolaha iyo kalluunka. Neste MY Shidaalka Duulista Waara ee qaabkiisa iyo wareegga nolosha, wuxuu yareynayaa ilaa 80% qiiqa gaaska lagu sii daayo marka la barbar dhigo isticmaalka shidaalka diyaaradeed.
Kordhinta isticmaalka Shidaalka Duullimaadka Joogtada ah (SAF) waa aaladda muhiimka u ah dearbonation of aviation. Iyada oo ay weheliso teknoolojiyada kale, waxay bixisaa waddo lagu gaaro duulimaadka eber ee saafiga ah ee heshiiska Paris. Markaan u dhowaanno COP26 ee Glasgow hadda waa xilligii Dowladda, maalgashadayaasha iyo warshadaha ay iska kaashan lahaayeen kor u qaadista adeegsiga SAF si loo xaqiijiyo dardar dhab ah tobankan sano.
Ogeysiiska maanta wuxuu muujinayaa tallaabada xigta ee Heathrow iyo qorshaha waaxda duulimaadyada ee UK ee duulimaadka eber eber. Si loo gaaro kor u qaadista degdegga ah ee wax soo saarka SAF, Heathrow waxay ka codsaneysaa Dowladda UK inay dejiso waajibaadka sii kordhaya ee u baahan ugu yaraan 10% SAF ee ay adeegsadaan shirkadaha diyaaradaha marka la gaaro sannadka 2030, taasoo ka dhigeysa ugu yaraan 50% illaa 2050. Tani waa inay la socotaa dhiirigelin ganacsi shirkadaha diyaaradaha si ay u kiciyaan baahida iyo kobcinta maalgashiga, iyo inay gacan ka geystaan ​​hubinta in Boqortooyada Midowday ay safka hore kaga jirto wax soo saarka SAF.
Heathrow waxay horeyba ula shaqeysay la-hawlgalayaal ay kujiraan shirkado diyaaradeed oo ku saabsan sameynta SAF sidaa darteed xarunta UK waxay ku guuleysan kartaa ujeedkeeda ah inay noqoto mid ka mid ah garoomada diyaaradaha ee ugu waarta adduunka. 58% shirkadaha diyaaradaha ee Heathrow ee dhaqdhaqaaqa taraafikada ayaa u heellan isticmaalka 10% SAF marka la gaaro 2030. Gudiga isbadalka cimilada saadaashiisa ugu badan ee isticmaalka SAF sanadka 2030 wuxuu ahaa 7%, muujinta duulimaadyada Heathrow horeyba waa 84% wadada saadaashaan.